BabyAngle: September 2012
ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်လေးချက်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်... ပါဝင်တာကတော့.sushi fish fillet နှစ်ပြား၊ ခရမ်းချဉ်သီး၎လုံး ငပိနည်းနည်း၊ မန်ကျည်းသီးနည်းနည်း၊ ကြက်သွန်နီတစ်လုံး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းမှုန့်၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ ဆီ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ..
ပထမဆုံး... ကြက်သွန်နီကို တညက်တညက်ကြိတ်ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ.. ဆီသတ်တာကျက်လျှင် ဆနွင်းမှုန့်၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ထည့်ပေးပါ.. အနံ့မွှေးလာလျှင် ခရမ်းချဉ်သီးကို လေးစိတ်စိတ်ပြီး ကြေအောင်မွှေပါ..
ခရမ်းချဉ်သီးကြေသွားလျှင် ငပိနည်းနည်းကို ရေဖျော်ထည့်ပေးပါ၊ ဆူလာလျှင် မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို ပျစ်ပျစ်ဖျော်ပြီးထည့်ပေးပါ.. ဆူလာလျှင် ဆား၊ အချိုမှုန့် ထည့်ပြီး အရသာမြည်းကြည့်ပါ.. ပြီးလျှင် fillet များ သေးသေးတုံးပြီး ထည့်ပါ.. ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း သေးသေးလှီးပြီးထည့်ပါ။ ငါးကျက်လျှင် အရသာထပ်မြည်းပြီး လိုအပ်ရင် အရသာထပ်ထည့်ပေးပြီး ဆီပြန်လျှင် စားလို့ရပါပြီ..
နံနံပင်ရှိလျှင် အုပ်ပါက ပိုမွှေးပါတယ်..
ဒါကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးငါးငပိချက်ကစပ်တော့ အချိုလေးဖြစ်အောင် မှိုနဲ့ မုန်ညှင်းဖြူကို ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်ပြီး ဆား၊ အချိုမှုန့်တို့နဲ့ ကြော်ပြီး ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးဖြူးထားတာပါ...
Posted by BabyAngle at 08:00 10 comments:
လန်ကာဝီအပြန် The Batu Caves, Malaysia..
Batu Caves ၀င်ပေါက်ပါ...
The Batu Caves လှေကားထစ်ပေါင်း ၂၇၂ ထစ်ရှိပါတယ်။
လန်ကာဝီ နဲ့ KL ခရီးစဉ်လေးကတော့ ဒါပါပဲ. စာလည်းသိပ်မရေးတတ်တာကြောင့် ပုံပဲများများတင်ဖြစ် တာပါ.. နောက်မှာပဲ ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကိုရီးယား-ရှန်ဟိုင်း ခရီးစဉ်၊ Bintan ခရီးစဉ်၊ တို့က ပုံလေးတွေ ထပ်တင်အုံးမယ်နော်.
Posted by BabyAngle at 07:105comments:
လန်ကာဝီသို့ အလည်တခေါက် ခရီးစဉ်(၂)
လန်ကာဝီရဲ့အထင်ကရနေရာ Eagle Square
Posted by BabyAngle at 07:544comments:
လန်ကာဝီကမ်းခြေသို့အလည်တခေါက် ခရီးစဉ် (၁)
မနှစ်က အလည်သွားခဲ့တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက လန်ကာဝီကမ်းခြေရဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်..
Langkawi International Airport Taxi service Center
လန်ကာဝီကန်းခြေမှာ resort တွေ၊လည်းအများကြီးရှိပါတယ်.. အဲဒီအထဲကမှ beach အရသာလည်းအပြည့်အ၀ခံစားလို့ရပြီး ညဈေးတန်းတွေနဲ့နီးတဲ့ ဒီနေရာလေးမှာပဲ တည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ...
အခြားကျွန်းတွေကို boat နဲ့သွားမယ်...
Pregnant maiden island မှာရှိတဲ့ဒီရေကန်ဟာ တောင်သုံးတောင်ကြားမှာရှိပြီး ရေကရေချိုဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်းတွေပေါ်မှာ မျောက်တွေ အရမ်းပေါ
Pregnant maiden island မှာရှိတဲ့ဒီရေကန်ဟာ တောင်သုံးတောင်ကြားမှာရှိပြီး ရေကရေချိုဖြစ်နေပါတယ်။ solar system တပ်ထားတဲ့ Boat တွေ စီးလို့ရတယ်
နောက်ကျွန်းတခုမှာတော့ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပါ.. ငါးစာကျွေးလို့ရပါတယ်...
ပြီးတော့ Eagle တွေကို အစားကျွေးတဲ့နေရာကိုသွားပါတယ်..
ဒီကျွန်းလေးကလည်းအရမ်းလှပါတယ်.. နားချိန် နှစ်နာရီနီးပါးရတာမို့.. ထမင်းစားလို့ရတယ်၊ banana Boat, Snorkeling လို့ရပါတယ်..
အဲဒီကျွန်းပေါ်မှာပဲ ရေကကြည်နေတော့ ငါးလေးတွေတောင်မြင်ရတယ်..
Langkawi Sky Bridge ကိုသွားရာလမ်း
Cable ကား ပေါ်ကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့ Seven Wells ရေတံခွန်
Cable care ပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ cable care စစီးတဲ့နေရာက ဆိုင်လေးတွေပါ..
Cable car ပေါ်မှလှမ်းမြင်နေရတဲ့ Sky Bridge
Cable car က လှမ်းမြင်နေရတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ပြီး၊ အဲဒီကနေ sky bridge ကို တောင်လမ်းတလျှောက်ပြန်ဆင်းပြီး လာရပါတယ်.. အသဲတယားယားရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ အသွားအပြန်နှစ်ခေါက် လျှောက်ပြီး အဲဒီတောင်ပေါ်ကနေပဲ cable care စီးပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်..
ဒါကတော့ သဲမဲကျွန်းလို့ ခေါ်တဲ့ လန်ကာဝီရဲ့ အထင်ကရနေရာလေးတစ်ခုပါပဲ.. အဲဒီတ၀ိုက်က သဲတွေက မဲနေပါတယ်..
Posted by BabyAngle at 14:076comments:
ထမင်းမြိန်စေမဲ့ အသုပ်လေးများ (၁)
My Emotions, My Sharings
Lovely Son Photo Gallery
blog အကြောင်း (1) ကျန်းမာရေး (1) ခရီးသွား (12) မိတ်ဆက်ခြင်း (1) မုန့် (7) ဟင်းချက်နည်း (28) အထွေအထွေ (2)